Tallaabo-tallaabo Guide A ee Corsair Flash Recovery
> Resource > Ladnaansho > Tallaabo-tallaabo Guide A ee Corsair Flash Recovery
Ma u baahan tahay Flash Corsair caawi Data Recovery!
Hi, markii aan la geliyo qalinka aan drive Corsair 4GB geli computer, waxaa la ii sheegay in ay qaab. Waxaan isku dayay 3 kombiyuutarada, oo dhan helay ogeysiis isla. Anna ma aan haatan qaab karo sababtoo ah waxaan leeyihiin qaar ka mid ah DoCS muhiim ah oo uga fiican yahay waxa ku jira. Ma jiraan wax xal suuragal ah in ay i bogsii xogta ka Corsair flash drive ka hor inta aan go'aan si ay u qaab? Best xiriira.
Qalabka lagu kaydiyo xogta Digital had iyo jeer la kulmaan arin isku mid ah. Musiibada Tani aad looga hortago ka helaan xogta aad Corsair flash drive, oo waxay noqon doontaa go'aan ah kuwa caqliga leh si ay u eegaan qaar ka mid ah danabka kabashada xirfad xogta ee internetka. Halkan Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah danabka kabashada xogta ugu wanaagsan ee kaa caawinaya inaad dib u soo ceshano xogta ka Corsair flash drive hab aad u fudud. Iyadoo qasabno wax yar uun, waxaad soo kaban karto noocyo kala duwan oo nooc file ka Corsair flash drive, oo ay ku jiraan waraaqaha xafiiska, files pdf, sawiro, videos iyo Cajalado files.
Hel version tijaabo ah Wondershare Recovery hadda. Version maxkamad Tani waxay aad u saamaxaaya in ay sameeyaan baaritaan aad Corsair flash drive intaadan gadan nooca buuxda, si aad u hubiso ka dhigi kartaa in qalab shuqullada fiican ee aad ama aadan.
Qabtaan Corsair Flash Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Orod barnaamijka lagu rakibay on your computer, oo aad arki doonaa interface bilaabatay 3 hababka soo kabashada. Si aad u soo kabsado xogta lumay ka flash drive Corsair, ha isku dayno "lumay Recovery File" mode hore.
Fiiro gaar ah: Fadlan geli aad flash drive Corsair la your computer iyo in la hubiyo in ay la tusay karaa sida drive adag on your computer.
Tallaabada 2 Hadda barnaamijka lagu ogaan doonaa oo tusi doono oo dhan storage devices on your computer. Just ay doortaan mid ka mid ah si aad u Corsair flash drive oo guji "Start" si ay u eegaan files lumay.
Tallaabada 3 Markii scan la soo gabagabeeyo, waxaad dib u soo ceshano karo xogta ka Corsair flash drive hadda. U yeelan doontaa in aad u aragto magacyada file, kuwaas oo ku qoran qaybaha bidixda ee suuqa kala barnaamijka aad. Waxa kale oo aad sidoo kale ku eegaan karo sanamyada helay.
Haddii faylasha aad u baahan tahay in ay dib ugu heli lahayn ayaa lagu helay, Calaameeyey oo guji "Ladnaansho" si ay u kaydiso on your computer ama qalab lagu keydiyo oo cusub.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ka badbaadin dib si aad u Corsair flash drive inta lagu guda jiro dib u soo kabashada ee files recoverable.
Sidee inuu ka soo kabsado Tusmada ee Compact Flash (CF) Card
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xijaab si loo soo celiyo files ka / xijaab tirtiray laga badiyay
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Canon PowerShot S95
Dane-Elec Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Dane-Elec Storage Devices
Saxda Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado saxda Photos ka Camera Canon Digital
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga formatted Cards
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Xogta laga isakoo Store
Sidee inuu ka soo kabsado formatted Photos